Broccoli sy creamy paoma - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Broccoli sy crème paoma
menaka40 minitraOlona 6160 kaloria
Tena malefaka, miaraka amina endrika miavaka ary feno fananana. Toy izany koa ity crème tsotra ity broccoli miaraka amin'ny paoma mamporisika anao aho hiomana.
Saingy aloha ... miverina amin'ny fahazarana, taorian'ny fitsangatsanganana tany Valencia, tsy te-hijanona misaotra ireo olona niaraka taminay aho Asehoy ny fandrahoana sakafo. Fahafinaretana nahafaly ny orinasanao ary nihaona mivantana tamin'ny mpamaky sasany. Raha ny marina, Rosa, misaotra ny fitiavanao.
Nanampy ahy koa io handany fotoana be fitiavana amin'ny mpiara-miasa amiko sy hihaona MayraAzonao inoana ve fa rehefa niara-niasa 5 taona izahay dia mbola nifankahita mivantana? Eo anelanelanao izaho ... olon-tiana izy io.
Ary aorian'ny fehintsoratra izay navoakako ho anao dia handeha amin'ny resipeo aho. Raha tsikaritrareo dia tsy voloko ilay paoma, ka tazomiko daholo ireo pectin ary azoko fa ny puree dia manana endrika mahavariana.
1 Broccoli sy crème paoma
Krema malefaka miaraka amina endrika miavaka vita amin'ny broccoli, paoma ary ovy. Ary raha manompo azy amin'ny toast crunchy… dia tsy hay tohaina!
20 g ny menaka oliva virjiny fanampiny
250 g ny broccoli
280 g ovy voahodina
Paoma 120 g, voahidy ary tsy voahodina
Rano 200 g
Ravina persily sasany
Napetrakay tao anaty vera ny menaka sy ny tongolo. Izahay dia manao fandaharana 1 minitra, maripana varoma, hafainganam-pandeha 4. Manaraka ny programa izahay 2 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Arotsahy ao anaty fehezam-boninkazo ny broccoli, ny ovy voahitsaka ary apetaho, ny paoma an-tsokosoko, ny ronono ary ny rano. Ny fitazonana ilay bikam-bary dia apetratsika ao amin'ny vhafainganam-pandeha 5 mandritra ny 3 segondra. Miomana amin'ny manaraka izahay 30 minitra, 100º, hafainganana sotro ary napetrakay ny lapa fa tsy ny goblet.
Amin'ny faran'ny fotoana dia miandry kely isika mba hilatsaka ny mari-pana. Izahay dia manampy ny sira sy ny voamadinika voakiky. Izahay dia manao fandaharana 20 segondra, hafainganam-pandeha 10, mitazona ny kaopy foana ary mitazona azy.
Manolotra ny crème amin'ny sombin-toast sy ravina persily vitsivitsy izahay.
Fanazavana fanampiny - Pmombamomba an'i Mayra Fernández Joglar, Mofo sy paoma mamy
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Sakafo ara-pahasalamana, Lasopy sy menaka, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Recipe manokana » Sakafo ara-pahasalamana » Broccoli sy crème paoma
Pixie Manga dia hoy izy:
Salama, afaka misy olona manazava amiko ny fomba fanaovana lasopy paty rehefa tonga ny hatsiaka, manaova thermomix
Mamaly an'i Pixie Manga
Andao hojerentsika raha tianao ity: https://www.thermorecetas.com/receta-thermomix-caldo-de-pollo/
Miarahaba anao amin'ny tranonkala. Fanontaniana iray: azonao esorina ve ny paoma? Raha izany, mieritreritra ve ianao fa tokony hametraka paoma fanampiny aho? MISAOTRA
Eny, raha tianao dia azonao atao izany raha tsy misy izany. Soloy broccoli misimisy kokoa (raha tianao io legioma io) na ovy bebe kokoa. Na amin'ny karaoty aza dia mety ho tsara ihany koa ...
Maria Campos Pérez dia hoy izy:
Salama. Tsy zakako ronono. Azoko atao ve ny tsy misy an'io sa mila soloina zavatra hafa aho?
Valiny tamin'i María Campos Pérez
Tony Salguero Villalobos dia hoy izy:
Tsy haiko raha tianao ny ronono misavoana, heveriko fa azo soloina ho azy na ho an'ny crème, misy legioma manome vokatra tsara. Soloiko izy fa tsy crème mahazatra mba hanala tavy amin'ireo lovia ary manome valiny tsara ho ahy. Manantena aho fa manampy anao izany.
Valiny tamin'i Tony Salguero Villalobos
Tsy zakako ny tsiron'ny ronono. Ary toy izany koa no mitranga amin'ny crème. Azoko tsara fa mety ny fampiasan'izy ireo ronono na crème hanamafisana ny crème? Afaka mametraka ovy bebe kokoa ve aho?
María Campos Pérez Manolo azy amin'ny ron-kena, fa tsara aminao ihany koa izany
Grace Gla Barros De la Rosa dia hoy izy:
Anita tena tsara, mahafatifaty ahoana ??????
Valiny tamin'i Grace Gla Barros De la Rosa
Erika Escrib Martinez dia hoy izy:
Fa tianao ve izany? Eny, zavatra hafa no tiako kokoa
Valiny tamin'i Erika Escrib Martinez
Toa fifangaroana mahafinaritra izany amiko, amiko dia tsy maintsy fanosotra tian'ny ankizy sy ny olon-dehibe izany. Sady mafana no mangatsiaka?
Eny, tao an-trano ny zanako kely no nihinana nahafinaritra 😉 Mikasika ny hatsiaka na ny hafanana ... matsiro amin'ny lafiny roa, amin'ny ririnina dia mafana sy mafana ny hatsiaka, nefa izany no tianao indrindra.
Holazainao amiko 😉
Mar Galián dia hoy izy:
Vao hariva aho no nanao an'io, tsara !!!!
Valiny tamin'i Mar Galián
Tsara, Mar !!!
Lorena De Paula dia hoy izy:
Efa nanandrana aho ary tsara izany, tian'ny zanako vavy izany! tsy "miady" intsony hohanin'izy ireo ny broccoli
Valiny tamin'i Lorena De Paula
Faly be aho, Lorena 🙂 Misaotra !!
Te hahafantatra izay karazana paoma nampiasanao aho.
Mampiasa Golden aho fa afaka mampiasa karazany hafa koa ianao.
Gonzalo Martínez Andrés dia hoy izy:
Salama, izaho no Gonxo. Te hahafantatra aho raha mahandro ny broccoli aloha ianao na manampy azy toa izao. Misaotra
Valiny tamin'i Gonzalo Martínez Andrés
Araraka toy ny ao anaty vera, anaty fehezam-boninkazo izy. Manantena aho fa tianao io 🙂
Misaotra betsaka androany hanomana azy aho ary hotantaraiko anao izany. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsaka Ascen. Mirary ny soa indrindra.
Faly be aho, ry Gonzalo. Misaotra anao!
Nankafy ny Thermomix ahy aho nandritra ny 5 andro?
Nataoko ny lasopy zucchini, voatavo italiana antsoinay azy ireo eto Shily, sambatra ny vadiko sy ny zanako vavy !!!
Ity lasopy broccoli sy paoma ity, ny paoma volamena dia mavo kokoa noho ny maintso, sa tsy izany? Miaraka amin'ilay maitso maitso mahazatra, mety tsara amiko ve izany?
Ankasitrahako ianareo afaka mamaly ahy
Eny, eny, ilay volamena no lazainao. Fa ho tsara tarehy miaraka amin'ireo karazany rehetra 🙂
Tsara! Thermomix vaovao! Fantatrao fa eto dia anananao izahay amin'izay ilainao. Mamoaka fomba fahandro isan'andro izahay mba tsy hanananao hevitra 🙂
Salama, nila nametraka azy tamin'ny degre 90 aho, tsara tamin'ny 100, nisondrotra ny ronono ary be ny rano.
Fahatezerana inona! Nahavita tsara ianao mba hampihenana ny maripana. Indraindray izany dia mitranga amin'ny resipeo sasany. Heveriko fa mety noho ny haben'ny fangaro ...
Mila milaza aho fa na dia tsy mahazaka broccoli aza aho ary mamantatra fomba an'arivony hampidirina azy amin'ny sakafoko dia tiako io! Ka arahabaina amin'ny recette! Nahazo ahy naka izany ianao nefa tsy tsapanao akory! Ka efa manana ilay recette voaaro tsara !!! ?
Tsara, Esther !! Tiako ny hevitrao 🙂
Artichoke miaraka amin'ny saosy maitso sy akoho
Tsaramaso tanora malalaka miaraka amin'ny saosisy ra